गृहमन्त्री निधिद्धारा राजिनामा दिने तयारी ,चुनावअघि किन यस्तो निर्णय ? - USNEPALNEWS.COM
गृहमन्त्री निधिद्धारा राजिनामा दिने तयारी ,चुनावअघि किन यस्तो निर्णय ?
- यूस नेपाल न्युज प्रकाशित मिति: April 5, 2017
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले पदबाट राजीनामा दिने भएका छन् ।
स्रोतका अनुसार आफूलाई वरियतामा दोस्रो नम्बरमा अर्थात वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्री नबनाई अपमान गरेको भन्दै कांग्रेस नेता समेत रहेका निधि राजीनामा दिने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।
उसो त प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) प्रकरणमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग चिढिएका निधिले आफ्ना निकटस्थसँग प्रचण्ड सरकारको ९ महिने कार्यकाल (साउन २१ देखि चैत २१ सम्म) अर्थात आयु सकिएको बताउने गरेका छन् ।
यही बीचमा वरियता विवादले असन्तुष्ट रहेका गृहमन्त्री निधि राजीनामा दिने मनस्थितीमा पुगेका हुन् । उनले केही दिनभित्रै राजीनामा दिने स्रोतको भनाई छ ।
यता प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्री तपाई नै हो भनेर निधिलाई आश्वासन दिने गरेका छन् । तर, राप्रपा अध्यक्ष समेत रहेका उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापालाई आन्तरिक रुपमा वरिष्ठ उपप्रम बनाउने प्रचण्ड र देउवाबीच सहमति भएको सूचना पाएपछि निधि रुष्ट बनेका हुन् ।
यता राप्रपा अध्यक्ष थापाले आफूलाई वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्री नबनाए सरकार छाड्ने धम्की दिँदै आएका छन् । जसकारण प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफ्नो सरकार जोगाउन भएपनि थापालाई वरिष्ठ उपप्रम बनाउन बाध्य भएको बताइन्छ ।
शशांकले भने : ‘रामचन्द्र दाइ उत्तेजनामा आएर नबोल्नुस्’
यूस नेपाल न्युज	 April 30, 2018
नेपाली कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल कोलोराडोमा
यूस नेपाल न्युज संवाददाता	 May 4, 2016
धादिङ सीलः नाकामा सुरक्षाकर्मी परिचालन
यूस नेपाल न्युज संवाददाता	 May 14, 2020